Rita, Writing for My Sake!: ဗုဒ္ဓဘာသာ မေးခွန်းများ
Posted by Rita at 1/17/2010 05:56:00 PM
Yita ရေ လာဖတ်သွားပါတယ်။ ဖြေပေးထားတာလေးတွေ သိပ်ကို ကောင်းပါတယ်။ ခေတ်ပညာတတ် အတော်များများက ကံကံ၏အကျိုးနဲ့ ပတ်သက်ရင် လက်ရှိဘ၀မှာ ရှိနေတဲ့ ကံအကျိုးကိုပဲ ယုံကြည်ကြပြီး ရှေ့ဘ၀၊ နောက်ဘ၀နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပဋ် သံသရာစက်ဝိုင်းကို လက်မခံကြဘူး။ ဘာသာရေးအပေါ် ယုံကြည်မှု နားနည်းလာကြတဲ့ အခုလို သိပ္ပံထွန်းကားတဲ့ခေတ်မှာ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလေးအနက်ရှိတဲ့ လူငယ်တွေကို တွေ့ရတိုင်း ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်။
စာတွေဖတ်သွားပါတယ် နောက်မှမေးစရာတွေ လာမေးမယ်နော် ကျေးဇူးပါ
ထိထိမိမိ ပြတ်ပြတ်သားသားရှိတဲ့အဖြေလေးတွေအတွက်ရော ထပ်ရလိုက်တဲ့ ဗပာုသုတတွေအတွက်ရော ကျေးဇူးပါအစ်မ။
ကျွန်တော်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ် ခုထိမဖြစ်သေးဘူးထင်တာပဲ ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာ ကိုယ်လိုက်မမှီတာရှိရင် ဖြုတ်ထည့်လိုက်တာပဲ ဥပမာ.. နောက်ဘ၀ ရှေ့ဘ၀မျိုး.. မသိ၊ ဘုရားဆိုလည်း သူ့နောက်ဘ၀တွေ ထည့်တွေးမနေဘူး.. သူမွေးတယ် သူအမှန်တရားကို ရှာတယ် တွေ့တယ် ဟောပြောတယ် သူသေတယ်.. သူဟာကြီးမြတ်တဲ့ တုနှိုင်းမမှီတဲ့လူသားတစ်ယောက် ... ဒါပဲသိတယ် သူဟောပြောသွန်သင်တာတွေကို အကုန်လည်းလိုက်မလုပ်နိုင်ဘူး ... အဲ တစ်ခုတော့ရှိတယ် မင်းဘယ်ဘာသာဝင်မလဲဆိုရင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပဲ ဖြစ်ချင်တယ် ဘယ်တော့မဆို အစွဲကင်းရမယ်ဆို ဘာသာစွဲကော ကင်းလို့မရဘူးလားလို့ တစ်ခါတစ်ခါတွေးမိသား ...
မရီတာဖတ်သွားတယ်.စာတွေနဲ့လုံးပန်းနေရလို့သေချာမဖတ်ရသေးဘူး။ အားတဲ့အချိန်မှသေချာဖတ်မယ်. ကံနဲ့ပတ်သက်ပီ မြန်မာလူမျိုးဗုဒ်ဓဘာသာဝင်တွေ ၊မြန်မာတင်မဟုတ်ဘူး ကံသီအိုရီကိုနားလည်ချင်တဲ့ ဗုဒ်ဓဘာဝင်သင်တွေကော၊လေ့လာဆဲသူတွေ ကံကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ကြပါဘူး ထင်မိပါတယ်. အင်ဒါကလဲသူတို့အပြစ်မဟုတ်ဘူးလေ။ စာပေရအ ရဆိုရင်တော့ ကံကိုဘုရားမှတစ်ပါးအပြည့်အစုံနား မလည်နိုင်ပါတဲ့. ဦးဇင်းတို့ သာမန်တွေစဉ်း စားမယ်ဆို ရင်ရူးသွားနိုင်သတဲ့.
ဒီကဆရာ တစ်ယောက်မှတ်ချက်ပေးတကာက philosophically အရဆိုရင် လက်မခံနိုင်စ ရာဘဲတဲ့။ ဦးဇင်းဒီယောက်တော့ အိန်ဒိယ နဲ့ အနောက်နိုင်ငံ ကရေးတဲ့ဗုဒ်ဓဘာသာစာအုပ်တွေအ တော်များများကို ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်. ဖြတ်ဖြစ်တာ ကလည်း သူတို့ ဗုဒ်ဓဘာသာကိုဘယ်လိုသ ဘောထားသလဲ ဆိုတာသိချင်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဟာ ပါဠိစာပေကို တိုက်ရိုက်မကြည့်နိုင်ဘဲ secondary sources လောက်သာ ကြည့်ပီ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစာများလုပ်နေကြရော့လားလို့ထင်မိတယ်။ ဆက်တွေးမိတာက critical thinking ကိုကြိုက်လှပါဘိဆိုတဲ့ လူတွေများ ဖတ်မိရင်--------ဥပမားအားဖြင့် သူတို့ကံနဲ့ ပတ်သက်ပီဘယ်လိုရေးသလဲဆိုရင် ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ကံကို God လိုအရာရာကိုဖန်ဆင်းသူလို့ယုံကြည်ပါသတဲ့. ဒါဟာ God နဲ့ကံအတူတူပြောတာပါ. (ဘုရားရှင်က နိယာမတရားလေးပါးကိုပြောပီးသားပါ)
တချို့က ကံဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗြမ်မဏဝါဒ ရဲ့သဘောတရားတစ်ခုပါတဲ့၊ ဒီထက်မကနားမလည်ဘဲ ပက်ပက်စက်စက်ပြောထားတဲ့စာအုပ် တွေရှိပါတယ်. ဗုဒ်ဓဘာသာအရ ကံဆိုတာတကယ်ပင်လေးနက်ပါတယ်. မဟာကမ်မဝိဘင်ဂသုတ်.စူဠကမ်မဝိဘင်သုတ်၊အဋ္ဌသာလိနီအဋ္ဌကထာမိလိန်ဒပဥှာ စသည့်စသည့်ကျမ်း တွေမှာ ကံအကြောင်းတွေကိုဘုရားက သေချာဟောပီးသားပါ. နောက်ပီဦးဇင်းမေးချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်.scientifically နည်းကျရင် ခေတ်ပညာတတ်တွေက လက်မခံဘူးတဲ့။ scientifically နည်းကျကျဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲ။ Scientifically နည်းကျကျမဟုတ်ဘူး ဆိုသူတွေ စတီဖင်ဟော်ကင် အိုင်စတိုင်တို့ရဲ့ determinism and indeterminism စသည်တွေကိုသေချာ လေ့လာဘူးပါသလား၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မရီတာဖြေသွား တာကိုသဘော ကျပါတယ်.သဘောကျတယ်ဆိုတာက ဖြေပုံဖြေနည်းထက် ဘယ်လိုမေးရင်ဘယ်လို ဖြေမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖြေသွားတာကိုပါ၊ ဖြေသွားတဲ့အထဲမှာ သဘောမကျတာ တွေလည်းရှိပါတယ်. ဒါကလည်းပါဠိစာပေကို မလေ့လာဘူးတဲ့သူဆိုတော့ခွင့်လွတ်လို့ရပါတယ်.
ဥပမာ ကံလေးမျိုးဖော်ပြပီ ကိုယ့်အယူဆအရကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်း ဘူးဆိုတဲ့နေရာပါ. အမှန်ကအင်မတန်စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းပါတယ် ဘုရားဟောတဲ့ဝီထိအစဉ်နဲ့ ဇောတွေကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။ ဒါကလည်းကိုယ့်အယူဆလို့ပြောတဲ့အတွက်မှားတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး. ဦးဇင်းရဲ့ကွန်မန့်က မရီတာပိုစ်တစ်ခုလုံးရဲ့တစ်စိတ်တဒေသသာဖြစ်ပါတယ်. ဒါ့ကြောင့်ရေးထားတဲ့ပိုစ်နဲ့အာဘော်လွဲချော်ခဲ့သော်လည်းကောင်း မှားယွင်းခဲ့သော်လည်းကောင်း ခွင့်လွတ်ပါ.
Ref: (မင်းဘယ်ဘာသာဝင်မလဲဆိုရင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပဲ ဖြစ်ချင်တယ် ဘယ်တော့မဆို အစွဲကင်းရမယ်ဆို ဘာသာစွဲကော ကင်းလို့မရဘူးလားလို့ တစ်ခါတစ်ခါတွေးမိသား)
Little Brook, ကိုယ့် director တယောက်ပြောဖူးတာ ရှိတယ်။ အဲဒါကို ဗေဒင်၊ ယတြာ post မှာလဲ ထည့်ရေးဖူးတယ်။
"ဘာသာတွေ အမျိုးမျိုး ရှိလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လို့ အမည်တပ်ထားပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဟာ သဘာဝတရားကို ပြဆိုထားတာ ဖြစ်တယ်" တဲ့။
အဲဒီစကားကို လေးလေးနက်နက် တွေးကြည့်ရင်၊ ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်နဲ့ အညီ လက်ခံနေထိုင်ကျင့်သုံးနေတဲ့သူတွေ (ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်စစ်တွေ) ဟာ ထူထောင်ထားတဲ့ ဘာသာတရားတစ်ခုရဲ့ အစွဲအောက်မှာ နေနေကြတဲ့လူတွေ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ မြင်လာလိမ့်မယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ အမည်ခံတယ် ဆိုတာဟာ တံဆိပ်တခုခုကပ်လိုက်သလို၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စည်းဝိုင်းထဲသွင်း ဘောင်ခတ်လိုက်သလို မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို လက်ခံလာလိမ့်မယ်။
ဘုရားဟောတဲ့ တရား အကျိုးအကြောင်းတွေဟာ ဘုရားကိုယ်တော်တိုင် သတ်မှတ်ထိန်းချုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ အရာတွေ၊ ထူထောင်ခဲ့တဲ့သဘောတရားတွေ မဟုတ်ဘူး။ သဘာဝရဲ့ အမှန်တရားကို ပြဆိုခဲ့တာ ဖြစ်တယ် လို့ ကိုယ်ကတော့ လက်ခံထားတယ်။
"ယုံကြည်တဲ့လူ အတွက်သာလျှင် မှန်ကန်နိုင်တဲ့တရား မဟုတ်ဘူး။"
ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်ဖြစ်ပြီတဲ့ ဆိုရင်၊ အစွဲအားလုံးက ကင်းလွတ်သူ ဖြစ်နိုင်တယ် လို့ ယုံကြည်လက်ခံမိပါတယ်။
“ဥဒေါင်းမင်း မို့လို့ ဖြစ်မှာပေါ့... ” ဆိုတဲ့ အဖြေက မဆိုးပါဘူး။ ဥဒေါင်းမင်းက နေကိုရှိခိုးတယ်ဆိုပေမယ့် ... မောရသုတ်ပရိတ်ကို ဆက်ဖတ်ရင် ... “နမတ္ထု ဗုဒ္ဓါနံ နမတ္ထု ဗောဓိယာ နမော ၀ိမုတ္တာနံ ... ” စသဖြင့် ဗုဒ္ဓ, ဗောဓိဉာဏ်, တွေကို ရှိခိုးထားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ထဲက Symbolism တွေအနေနဲ့ “နေမင်း နဲ့ ဗုဒ္ဓ”, ကျော့ကွင်းမှ လွတ်ခြင်းနဲ့ ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်ခြင်းတွေကို နိုင်းယှဉ် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။